पन्तको किर्तिमानी शतकले पनि जोगाउन सकेन भारतलाई, दक्षिण अफ्रिका जित नजिक – Talking Sports
पन्तको किर्तिमानी शतकले पनि जोगाउन सकेन भारतलाई, दक्षिण अफ्रिका जित नजिक
विकेट किपर ब्याटर ऋषभ पन्तले किर्तिमानी शतक प्रहार गरे पनि घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको तेश्रो तथा अन्तिम टेस्टमा भारत हार नजिक पुगेको छ । तीन खेलको शृंखला १-१ को अवस्थामा रहेको छ । यस टेस्टमा जित हात पार्ने टोलीले शृंखला माथि पनि कब्जा जमाउने छ ।
२१२ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले तेश्रो दिनको खेलको समाप्तिमा २९ दशमलब चार ओभर खेल्दै दुई विकेटको नोक्सानीमा १०१ रन बनाएको छ । अब अन्तिम दुई दिनको खेल बाँकी रहँदा दक्षिण अफ्रिकालाई जितका लागि १११ रनको आवश्यकता रहेको छ भने उसको हातमा अझै आठ विकेट बाँकी रहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाका किगन पिटरसन ४८ बलमा अविजित छन् । ६८ बलको सामना गरेका उनले सात चौका प्रहार गरे । पहिलो दिनको खेल सकिनु केही बल अघि मात्र ओपनिङमा आएका कप्तान डिन एल्गर ३० रन बनाएर जस्प्रित बुम्राको बलमा आउट भए भने अर्का ओपनर ऐडेन मारक्रम १६ रन जोड्दै मोहम्मद शामीको शिकार बन्न पुगे ।
पहिलो पारीको आधारमा १३ रनको अग्रता लिएको भारतको तर्फबाट पन्तले अविजित रहँदै १०० रन बनाए पनि पुरै टोली ६७ दशमलब तीन ओभर खेल्दै १९८ रन जोड्दा अलआउट हुन पुग्यो ।
१३९ बलको सामना गर्दै ६ चौका र चार छक्का प्रहार गरेका पन्त भारतको तर्फबाट इंग्ल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकामा शतक प्रहार गर्ने पहिलो र एक मात्र विकेट किपर हुन् । पन्त बाहेक कप्तान विराट कोहलीले १४३ बलमा २९ र ओपनर केएल राहुलले १० रन बाहेक कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
भारतलाई सस्तोमा रोक्ने क्रममा मार्को यानसनले सर्वाधिक चार विकेट हात पार्दा कागिसो रबाडा र लुंगी एनगिदीले पनि समान ३-३ विकेट आफ्नो नाममा लेखाए ।
अफ्रिका कप अफ नेसन्सः क्यामरुन नकआउट पुग्ने पहिलो टोली
प्रहरीका सन्देश र बिशाल सिँहको भारत्तोलनमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान
सनसनीपूर्ण जित निकाल्दा दक्षिण अफ्रिकाको क्लिन स्विप
पुलिसलाई हराउदै मनाङ आहा–रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
आईपीएलका लागि आवेदन दिने १५ जना नेपाली खेलाडीहरु को को हुन् ?
‘बिबेक टिममा डिमान्ड भए अनुसारको अलराउण्डर हुन्’
पाँच धनी आईपीएल फ्रेन्चाइजहरु
आईपीएलको मेगा अक्सनमा १५ जना नेपाली खेलाडीहरु
सातौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका दिपक चाहरले आक्रामक पारी खेल्दै भारतलाई जित नजिक पुर्याए पनि तेश्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेलमा चार रनको सनसनीपूर्ण जित निकाल्दा दक्षिण अफ्रिकाले शृंखला माथि क्लिन स्विप गरेको छ ।
पहिलो एकदिवसीय खेलमा ३१ रनको जित दर्ता गराएको दक्षिण अफ्रिकाले दोश्रो खेलमा भारतलाई सात विकेटले पाखा लगाएको थियो । आजको जितसँगै दक्षिण अफ्रिकाले तीन खेलको शृंखला ३-० ले आफ्नो पक्ष्यमा पारेको हो ।
खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले विकेट किपर तथा ओपनर क्विन्टन डि ककको शतकको मद्दतमा ४९ दशमलब पाँच ओभर खेल्दै आफ्ना सबै विकेट गुमाएर २८७ रन बनायो भने पूर्व कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन र चाहरको अर्धशतकको बाबजुद भारतले ४९ दशमलब दुई ओभर खेल्दै आफ्ना सबै विकेट गुमाएर २८३ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
२२३ रनमा सात विकेट गुमाएर फराकिलो हार तर्फ लम्केको भारतको लागि चाहरले जस्प्रित बुम्रासँग मिलेर आठौं विकेटका लागि ३० बलमा ५५ रनको साझेदारी गर्दै जितको आशा जगाए । तर ३४ बल खेल्दै पाँच चौका र दुई छक्का सहित ५४ रन बनाएका चाहर लुंगी एनगिदीको शिकार बन्दा भारतको ह्वाइटवासबाट बच्ने सपना पनि चकनाचुर हुन पुग्यो ।
भारतका कप्तान केएल राहुल नौ रनमा आउट भए पनि कोहली र धवनले दोश्रो विकेटका लागि ९८ रनको साझेदारी गर्दै भारतको पारी सम्हाले । धवन ६१ रन बनाएर आउट भए भने विकेट किपर ब्याटर ऋषभ पन्त गोल्डेन डकआउट हुन पुगे ।
भारतको लागि सर्वाधिक ६५ रन बनाएका विराट तथा श्रेयस ऐयर २६ र सुर्यकुमार यादव ३९ रनमा आउट हुँदा भारत फराकिलो हार नजिक पुगेको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको जितमा लुंगी एनगिदी र एन्डिले फेहुक्वायोले समान ३-३ तथा ड्वेन प्रिटोरियसले दुई विकेट हात पारे ।
ओपनर यानेमन मलान एक, कप्तान तेम्बा बवुमा आठ र एडन मरक्रम १५ रनमा आउट हुँदा खराब सुरुवात गरेको दक्षिण अफ्रिकाको लागि डि ककले शतकीय पारी खेल्दै पारी सम्हाले । १३० बल खेल्दै १२ चौका र दुई छक्का सहित १२४ रनको पारी खेलेका डि ककले पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका रासी भान डर डुस्सेनसँग मिलेर चौथो विकेटका लागि १४४ रनको साझेदारी गरे ।
डुस्सेन ५९ बलमा ५२ रन बनाउँदै आउट । त्यस्तै डेविड मिलरले ३९ तथा ड्वेन प्रिटोरियसले २० रन बनाए भने अन्यले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।
भारतका प्रशिद कृष्णाले सर्वाधिक तीन विकेट हात पार्दा दिपक चाहर र जस्प्रित बुम्राले समान २-२ विकेट आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।
@wesportz Watch full video on our YouTube. #viral #viralvideo #foryou #nepalicricket #bibekyadav ♬ original sound – Addicted to rash😍❤️
डि ककको शतकमा भारतलाई विशाल लक्ष्य
ओपनर तथा विकेट किपर क्विन्टन डि ककले एकदिवसीयमा १७ औ शतक प्रहार गरे पछि घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई तेश्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल जित्नका लागि २८८ रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ ।
खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले अन्तिम १६ बलमा चार विकेट गुमाउँदा ४९ दशमलब पाँच ओभर खेल्दै आफ्ना सबै विकेट गुमाएर २८७ रन बनायो ।
तीन खेलको शृंखलामा दक्षिण २-० ले अघि रहेको छ । आजको खेलमा जित निकाल्न सकेको खण्डमा दक्षिण अफ्रिकाले शृंखला माथि क्लिन स्विप गर्नेछ ।
ओलावाले ओलादिपो अफिज नेपाल पुलिसको खराब डिफेन्डिँगको फाइदा उठाउन सफल भएपछि मनाङ मस्र्याङ्गदी क्लब आहा–रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
पोखरा रँगशालामा ओलावाले दुवै गोलमा संलग्न हँुदा मनाङ पुलिसलाई २–० ले हराउन सफल भयो । पुलिस हिमालयन शेर्पा क्लबलाई टाई ब्रेकरमा हराउदै क्वार्टर–फानल पुगेको हो भने मनाङ सोझै अन्तिम ८ का लागि ड्र भएको थियो ।
पहिलो हाफमा दुवै टोली गोल गर्न असफल भएपछि मनाङ दोश्रोमा हावी हुन पुग्यो । यसमा पुलिसको खराब प्रदर्शनले नै मनाङलाई सघाएको थियो ।
६४ औं मिनेटमा अजित भण्डारीले खराब डिफेन्डिङ्ग गर्दा मनाङले खेलमा अग्रता लियो । पुलिसको बक्समा रुपेश केसीले दवाब बनाउदा अजितले बललाई मनाङ फर्वार्ड ओलावालेलाई दिन पुगे । ओलावालेले रुपेशकै लागि बल निकाल्दा उनले भलिमार्फत सुन्दर गोल गरे ।
८३ औं मिनेटमा जुमानु राईले गोल गर्ने सुनौलो अवसर गुमाए । रवि पासवानको क्रसमा बक्स भित्र रहेका जुमानुलले आफैलाई असहज स्थिति पुर्याउन पुगेपछि अन्त्यमा फितलो प्रहार गर्दै अवसर खेल फालेका थिए ।
लगत्तै मनाङ्गले अग्रता दोब्बर बनाउने मौका गुमायो । ओलावालले तिब्र रन बनाउदै बक्स भित्र निकालेको क्रसमा अशोक थापा मगरले गरेको प्रहारलाई पुलिसका गोलकिपर सन्जिव श्रैष्ठले रोकेका थिए । तर ८८ औं मिनेटमा ओलावालेले मनाङको जित सुनिश्चित बनाए ।
यसपटक फेरि पुलिसको खराब प्रदर्शन यसको कारक बन्यो । ओलावालेले भालो सिलवाललाई मिडफिल्डमा डिसपोजेस गर्दै राम्रो ड्रिब्लिँगका साथ पुलिसको बक्स नजिक पुग्न सफल भए । अजित र भोलाको दवाबका बीच नियन्त्रण नगुमाएका ओलावालले गोलकिपर सन्जिव अगाडी बसेको अवस्थामा बक्स बाहिर बाटै गोल गरेका थिए ।
जेसन होल्डरले घातक बलिङ गर्दा इंग्ल्यान्डको लज्जास्पद हार
अमेरिकी टोलीलाई हराउदै एपिएफ सेमिफाइनलमा
चार देशीय शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानको सामना गर्ने
नेपाल एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलको फाइनलमा
दुई महिना अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा व्यस्त हुँदै नेपाली टोली
उपाधि चुम्ने लक्ष्य सहित बंगलादेश पुगेको नेपालको फाइनल खेल्ने सपना अधुरै
श्रीलंकासँगको हारमा नेपालको सम्मानजनक ब्याटिङ
एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलमा लगातार चौथो जित हात पार्दै नेपाल फाइनलमा
थ्रि स्टारसँग रोक्किएपछि आर्मी एएफसी कपको समिकरणबाट बाहिर